Ukucoca umfanekiso wokuqala osemthethweni we-Samsung S10 + | I-Androidsis
Umfanekiso wokuqala we-Samsung Galaxy S10 + ucociwe
Sele kunjalo imifanekiso eyahlukeneyo yokwenyani Oko befika bevela kwi-Samsung Galaxy S10 + kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo. Namhlanje ngumhla we umfanekiso wokuqala wefowuni eziza kuboniswa ukuphela kwenyanga ezayo ukonwaba kubo bonke abalandeli begama.
Umfanekiso lowo ityhila ngaphambili ukubonwa kwaye oko kubonisa umngxuma kwiscreen sokushiya ibhetri kunye neempawu zamandla emqondiso ezibekwe nje ngasekhohlo. I-smartphone ekhangeleka intle kunye noyilo olutsha ngaphambili kwaye iya kuba yintoni inzwa yeminwe ebethelelwe kwiscreen esinye.
Sikwanethuba lokunikela ubungqina ifomathi yekhamera kathathu ethe tye ekhoyo ngasemva kwaye ithatha indawo ephambili. Ifoto ekulindeleke ukuba iphuculwe ngaphambi kweGPS S9 kunye ne-S9 +.
Ukusuka kwinkcazo enokubakho ye-Samsung Galaxy S10 +, siyazi ngamahemuhemu ahlukeneyo kunye nokuvuza ukuba iya kuba ne-6GB RAM, ukugcinwa I-512GB / 1TB yangaphakathi, Iscreen se-6,44-intshi Super AMOLED 1440 x 2960 screen, ikhamera engemva eneelensi ezintathu ze-16/16/13 ze-MP kumgangatho kunye ne-12MP yeyiphi eya kuba yifowuni, kunye nomphambili ongaphambili ngesisombululo se-8 + 5 MP.
Inzwa yeminwe iya kufakwa kwiscreen esinye, ibhetri iya kuba yi-4440mAh kwaye ikhonkco iya kuhlala i-Type-C ye-USB ngaphandle kokulibala uqhagamshelo lwe-3,5mm kwisandi. Ifowuni ikhangeleka intle Kwaye sijonge phambili ekuboneni ngokwenene ukuba iya kwahluka kwi-Galaxy S8 kunye ne-S9.
Yonke into ibonakala ngathi amava emngxunya kwiscreen esingaphambili aya kubonelela aya kuthetha Iscreen sokwenene ngeGPS S10 + hayi ezo zinotshi sizibonileyo kwiApple kunye neefowuni ezininzi; ayishiywanga ukuba i-Samsung isungule inkqubo inotshi kunye neM10 kunye neM20, kodwa kolunye uhlobo lwentengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Umfanekiso wokuqala we-Samsung Galaxy S10 + ucociwe
Baleka ejele kwi-Great Escapists 2: Ukuqhekeka kwePokotho
Yeyiphi ifowuni yesikrini esigcweleyo ekhethwa ngabasebenzisi beXiaomi? [Uvoto]